Bible Mu Nsɛm Nnipa To Aban Kɛse - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
MFE pii twaam. Noa mma no woo mma pii. Na wɔn mma no nyinyinii ma wɔn nso woe. Ankyɛ na nnipa pii baa asase so.
Saa nnipa yi mu biako ne Noa nanankanso bi a wɔfrɛ no Nimrod. Na ɔyɛ onipa bɔne a okunkum nnipa ne mmoa. Nimrod san yɛɛ ne ho hene dii nnipa afoforo so. Onyankopɔn ampɛ Nimrod asɛm.
Saa bere no na nnipa nyinaa ka kasa koro. Nimrod pɛe sɛ wɔn nyinaa tra faako na watumi adi wɔn so. Enti wunim nea ɔyɛe? Ɔka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ wɔnkyekye kurow na wɔnto aban kɛse bi wɔ mu. Hwɛ wɔn wɔ mfonini no mu a wɔreyɛ ntayaa.
Yehowa Nyankopɔn ani annye saa dan yi ho. Onyankopɔn pɛe sɛ nkurɔfo pete na wɔtratra asase nyinaa ani. Nanso nkurɔfo no kae sɛ: ‘Mommra! Momma yɛnkyekye kurow na yɛnto abantenten a n’atifi bedu soro. Ɛno bɛma yɛagye din!’ Na nkurɔfo no pɛ sɛ wɔhyɛ wɔn ankasa ho anuonyam, ɛnyɛ Onyankopɔn.
Enti Onyankopɔn maa nkurɔfo no gyaee aban no to. Wunim sɛnea ɔyɛɛ no? Ɔmaa wɔn nyinaa fii ase kaa kasa horow, a wɔanka kasa koro bio. Afei de na wɔn a wɔresi dan no nte wɔn ho kasa bio. Ɛno nti na wɔfrɛɛ wɔn kurow no Babel, anaa Babilon, a ase ne “Basabasa.”
Afei nkurɔfo no fii ase sɛ wofi Babel rekɔ. Nnipa akuw a wɔka kasa koro boom kɔtratraa asase so mmeae horow.
Hena ne Nimrod, na Onyankopɔn tee nka dɛn wɔ ne ho?
Sɛ wohwɛ mfonini no a, adɛn nti na na nkurɔfo no reyɛ ntayaa no?
Adɛn nti na Yehowa ani annye dan a na wɔresi no ho?
Dɛn na Nyankopɔn yɛe a ɛma wogyaee aban no to?
Dɛn ne kurow no din, na na edin no kyerɛ dɛn?
Onyankopɔn yɛɛ wɔn kasa basabasa wiei no, dɛn na nkurɔfo no yɛe?
Kenkan Genesis 10:1, 8-10.
Suban horow bɛn na Nimrod yi no adi, na asuade bɛn na yenya fi mu? (Mmeb. 3:31)
Kenkan Genesis 11:1-9.
Adwene bɛn na wɔde too abantenten no, na ɛyɛɛ dɛn na adansi no anyɛ yiye? (Gen. 11:4; Mmeb. 16:18; Yoh. 5:44)